Yunivarsiitii Wallaggaa Kaampaasii Shaambuutti barattoonni lama lubbuu dhaban - BBC News Afaan Oromoo
Yunivarsiitii Wallaggaa Kaampaasii Shaambuutti barattoonni lama lubbuu dhaban
Yunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambuutti mormiin walqabatee barnootni dhaabbatee ture. Gara galgalaa ammoo barattoonni lama du'uu isaanii dhageenyeera.
Barattoonni BBC'n dubbise waan jedhan, ''Adigraatitti obbolaawwan keenya dhumaa jiru,'' jechuun barattoonni mormii dhageessisuun, barattoota kaan irratti haalellaa taasisan. Kanaanis ijoolleen lama gara daggalaatti geeffamuun ajjeefamaniiru.
Kaampaasii kanatti, sa'aa sadiirraa eegalee dhalattoonni saba tokko tokko iddoo ciisichaa isaanii keessatti miidhaan irra gaheera jedhan barattoonni. Kaleessa galgalaa qabees, buufata poolisiitti dahatanii akka argamanis ibsaniiru.
Eenyummaan isaanii akka eeramu kan hin barbaanne barattoonni kunniin, barattoonni lubbuun darbe Hagoos Sayifa fi Adoonaay Alamsaggad akka jedhaman nutti himaniiru.
Barataan Hagoos damee Qonna Baadiyyaa waggaa lammaffaa kan barachaa ture wayita ta'u, Adoonaay ammoo Hortikaalchara barata ture.
Itti gaafatamtoonni Kominikeeshinii Naannolee Oromiyaa fi Tigraay dhimmichi uumamuu fuula feesbuuk isaanii irratti mirkaneessaniiru.
Kaleessa Mudde 2, 2010 halkan keessaa naannawa sa'aa 6tti, waldhabdee barattoota gidduutti uumameen, lubbuun barattoota lamaa akka dabres barreessaniiru.
Waldhabdee kana keessatti kan hirmaatanii fi namoonni lubbuu balleessuun shakkaman, to'annoo jala akka argamanis angawoonni kunniin himaniiru.
Kanarratti haasoofsiisuuf angawoota Yuniivarsiitii Wallaggaa argachuu hin dandeenye.
Jimaata dabre walitti bu'insa Yuniivarsiitii Addigraatitti uumameen, lubbuun barataa tokkoo kan dabre wayita ta'u, kanumaan walqabatees, kaleessa Yuniivarsiitiiwwan Amboo, Gondar, Wallaggaa fi Daseetti mormiin akka ture BBC'n gabaasee ture.